Home Wararka FEIT “Jadwalka Doorashada aan soo saarnay waa mid lacag loga raadinayo Beesha...
FEIT “Jadwalka Doorashada aan soo saarnay waa mid lacag loga raadinayo Beesha Caalamka”
Gudiga taabagalinta Doorashooyinka heerka Federaal ee luuqada Ingiriiska lagu yiraahdo (FEIT), ayaa waxaa la soo daristay dhaqaale xumi baahday. Waxa aan jirin dhaqaale ay dowlada u qorsheeysay in ay ku bixiso doorashada ama gudigaba ku howlgalo.
Dhanka kale, beesha caalamka ayaa dhankooda shaki badan ka muujiyay shaqada ay wadaan gudiga doorashooyinka, taasina waxa ay keentay in gabi ahaanba beesha caalamka dhagaha ka fureysato codsiga ugu yimid gudiga doorashooyinka.
Dublumaasi kamida beesha Caalamka ee taageera dowlada Soomaaliya ayaa sheegay in ay aad u adagtahay inay aaminaan gudiga doorashooyinka, lacagna ku bixiyaan gudigaas.
“Waxa aan ognahay oo aan xaqiijinay in doorashadii hogaanka gudiga doorashooyinka uu ahaa mid ku dhacay si musuq-maasuq ah, lacagna lagu iibsaday hogaanka FIET, sidaas darteed, marnaba kalsooni kuma qabno, aniag iyo dowladeeyda, in kooxdaas ay qaban karto doorasho xalaal ah oo daah furan”. Ayuu yiri Dublumaasigaas oo ka gaabsaday in aan magaciisa sheegno.
Waxa uu intaas ku daray “mar hadii iibsashada cododka ay ka bilaabatay kuwii iyaga garsoorka ka ahaan lahaa doorashada Soomaaliya, ma noo muuqato sabab aan lacag canshuur ah oo laga soo qaaday dadkeena xiligaan uu cudurka Carona Virus uu hayo, in aan ku bixino lacag koox u muuqata in ay qayb ka yihiin dhibka Soomaaliya haysta”.
“Waxa aan haynaa cadeeymo, isugu jira Video, Whatsapp messages iyo codod xqiijinaya in lacag lagu kala iibsaday hogaanka gudiga, waana waxa aan la wadaagay xogtaas dowladeyda iyo wadamada kale oo ay quseyso”. Ayuu sii raaciyay dublamaasigaas.
Dhanka kale, mid kamida Gudiga FEIT ayaa u sheegay MOL in ujeedada loo soo dadajiyay jadwalka ay ahayd in beesha caalamka lacag looga helo ama lagu qanciyo in ay lacag siiyaan gudiga doorashooyinka.
“walaal, anaga waxa noo muuqata in jadwalka aan soo saarnay uu yahay mid aan macquul ahaynin in la fuliyo, aqalka sare waa fudud yahay, laakiin waxa kuu sheegayaa jadwalka soo baxay waa mid aan lacag ku raadinayno laakiin ma aha mid shaqayn karo ama shaqayn doono… Waa ka doodnay dhexdeena laakiin waxa la yiri aan dadka ku mashquulino kuna dhiirigalino in doorasho dhaceyso”. Ayuu yiri ninkaas xubinta ka ah gudoga oo sheegay in aana magaciisa la sheegin.
Waxa uu intaas raaciyay “ Ugu yaraan sadax bilood oo dheeraad ah amaba ka badan waa ay ku darsameeysaa xiliga doorashada loo qabtay , anaga gudi ahaan wax dhib ah oo arintaas aan ku qabnaa ma jirto,.. laakiin arintaan waa mid FEIT kaliya aan ku kooban laakiin waa mid hogaanka sare ee dalka ka timid…. Walaahi doorasho sooma dhawa , taas aniga ayaad iga qoraysaa”